Ọgwụ ụlọ ọgwụ na ịmụ nwa
Ka oge ọmụmụ nwa na-eru nso, mbipụta nke ndebanye aha na ịkwụ ụgwọ iwu nke nne na nna na-aghọwanye ihe dị mkpa maka nne n'ọdịnihu. A na-enye akwụkwọ nkwarụ na nke a n'ụdị e mere maka ọrịa ọ bụla. Otú ọ dị, ọ ga-ahụrịrị ụfọdụ akụkụ nke issuance ya:
a na-enye onye ọrịa ọ bụla na-arịa ọrịa - ọ bụghị dọkịta ọ bụla, ma ọ bụ naanị site na onye na-ahụ maka nkịta na-agwọ ọrịa (ọ bụrụ na ọ dịghị, mgbe ahụ, ọ bụ ọkachamara n'ozuzu maọbụ usoro ọgwụgwọ);
a na-enye akwụkwọ a na izu iri atọ n'iji gestation, ma e wezụga maka ụmụ ebu n'afọ abụọ ma ọ bụ karịa, mgbe a ga-ahapụ akwụkwọ ahụ na izu 28;
ezigara na-arịa ọrịa na Russia maka ụbọchị 140 (ọnụego ụbọchị 70 tupu mgbe a mụsịrị nwa), ma na-ebu ụmụ abụọ ma ọ bụ karịa, oge ahụ na-abawanye ruo ụbọchị 194 (dịka ụbọchị 84 tupu ụbọchị 110 tupu ụbọchị ọmụmụ). N'otu oge ahụ, na Ukraine, e nyere ya maka ụbọchị 126 (ụbọchị 70 tupu / 56 ụbọchị mgbe ọ gasịrị), nakwa mgbe a mụrụ ụmụ ejima, ma ọ bụ na enwere ike ịmụ nwa, oge a na-abawanye site na ụbọchị 14, nke ruru ụbọchị 140.
Ọ dị mkpa ịmara na ọnụ ọgụgụ ụbọchị zuru oke nwere ike kesaa nwanyị n'ụzọ dịgasị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ndị nne n'ọdịnihu ga-ewe ụbọchị ole na ole tutu ịbịa ya na ọtụtụ oge mgbe.
Mgbe ụfọdụ, na mbụ, ndị inyom na-ajụ ịnye ụdị akwụkwọ a, na-eme mkpebi iji rụọ ọrụ ruo ụbọchị kachasị mkpa, ma emesịa gbanwee mkpebi ha mgbe oge ahụ adịkwaghị. N'okwu a, a ghaghị inyefe ha akwụkwọ ahụ, naanị ihe nkọwapụta na oge ezumike agaghị agụta ya site na ụbọchị mgbagharị, kama site na izu 30 ma ọ bụ 28 nke "ọnọdụ dị mma" ha. Ọ bụrụ na nne na-atụ anya na-atụ anya nwa nke abụọ, na-edebe iwu ahụ iji lekọta nwa mbụ ahụ, o nwere ikike ide edemede ime na ịmụ nwa iji nweta nrịanrịa na-arịa ọrịa n'ozuzu.
Ime ime na ịmụ nwa
Iji tinye akwụkwọ maka ịhapụ ezumike nká , ị ghaghị imejupụta akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-adịghị mma:
na akara banyere ihe kpatara enweghị ike maka ọrụ, ịkwesịrị ịkọwa koodu "05", nke dabara na ndabere maka ịnyefe na isiokwu a;
na akara na ndebanye aha maka ihe ndekọ ahụike na "ọnọdụ na-adọrọ mmasị" ozugbo (ya bụ, ruo izu iri na abụọ) a gosipụtara mmeghachi omume ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi;
na akara na ntọhapụ site na ọrụ ụbọchị nke mbụ, nakwa ụbọchị ikpeazụ nke nhapụ nke nne n'ọdịnihu abatala;
usoro banyere TIN anaghị edozi ya;
na akara na uru nke abamuru ahụ, kọlụm "na-efu onye ọrụ" adịghị ejupụta, n'ihi na ego gbasara afọ ime na ịmụ nwa ka Social Social Fund gafere.
Ugwo maka ime na ịmụ nwa
Iji dokwuo anya na ezighi ezi ma mechara nweta ụgwọ, ị ghaghị inye onye were gị ọrụ mpempe akwụkwọ nkwarụ. A na-atụ aro ya, ọ bụ ezie na ọ bụchaghị, ide ederede na-egosi n'ụzọ doro anya ụbọchị ndị ga-edekọ na ụbọchị site na mpempe akwụkwọ nkwarụ.
A na-atụle ego a na-akwụ ụgwọ na-adabere na data banyere ego nne na-enweta maka afọ abụọ gara aga na ọ na-arụ ọrụ. A na-eme ka ego ahụ kwekọọ na ego zuru oke. N'okwu a, ọ bụ naanị ụbọchị ọrụ ka a na-eche, ọ bụkwa naanị ụgwọ ndị ahụ nwere ike ịghọ ruru ego. Ogologo oge nke incapacity nwa oge maka ọrụ, yana oge nke ịchụpụ ọrụ nke a na-enwetaghị ego nke mkpuchi inshọransị, adịghị echebara ya echiche. Ọ bụrụ na, mgbe iwu mbụ gasịrị, a na-eme iwu nke abụọ ozugbo, a na-eme atụmatụ ahụ na-adabere na data site na abụọ ruo afọ atọ gara aga, ebe ọ bụ na ọ dịghị data ọhụrụ maka oge ịgba ụgwọ, n'ihi na nwaanyị ahụ anaghị arụ ọrụ.
Izu iri asatọ nke afọ ime - ọ dịghị edemede
Olu nke akpanwa n'afọ ime - otu esi ekpebi na ihe ị ga - eme?
Ntughari nwa ebu n'afọ
Kedu ihe ị ga - eme banyere isi ọwụwa n'oge ime?
Nke atọ atọ nke afọ ime
Igbe na ụlọ ọgwụ - ndepụta
Afọ imeju oyi - otu esi zere nsogbu n'ọdịnihu?
Ventriculomegaly na nwa ebu n'afọ
Polinazine n'oge ime ime
N'izu mbụ nke ịtụrụ ime - esi akpa àgwà?
Ọnwa 9 nke ime ime
Ụbọchị mbụ nke ịtụrụ ime - ihe ịrịba ama na mmetụta
Ụrọ ụbụrụ na-acha uhie uhie
Ọbara mgbatị nke akpanwa n'afọ ime
Ebube Akpụkpọ anụ Nkịtị 2013
Kedu ka esi eji aka aka ha dinaa?
Kedu ụdị mmekọahụ nwere?
Diazolin maka ụmụaka
Reese Witherspoon mere ememe ncheta ncheta ya na umu ya na ndi enyi ya
Kọlịflawa na igwe mmiri ọkụ
Nlekọta ụlọ akwụkwọ maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
David Beckham gbasoro ihe nlereanya nke Guy Ritchie ma kụọ ugboro 22
Onu maka uwe aji
Uwe ejiji maka nwanyi mgbe afọ iri anọ na anọ
Kedu otu esi ewere licorice syrup mgbe ụkwara ndị toworo eto?
Candles nke Genferon na Ime afọ
Kedu ka ọnụ ala si efe Singapore?
Bella Hadid pụtara na mkpuchi nke American ELLE
Afọ nke ọtụtụ